IVivo iQOO Space Knight Edition, uhlelo olulinganiselweyo lomdlalo | I-Androidsis
Inkxaso-mali yeBBK, iVivo, ibhengezile Olunye uguqulelo lwesiko lwefowuni yakho yokudlala, i IQOO. Olu hlobo lutsha olunomda lweselfowuni, olubizwa ngokuba I-knight yendawo, yaphefumlelwa nguLawulo lweNdawo yeSizwe yase China.
Njengohlobo lweMonster Black Knight olwavezwe ekuqaleni kwale nyanga, Le modeli iza ne-12 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina.
El IVivo iQOO Space Knight Edition engaphelelanga Ifakwe kwibhokisi ekhethekileyo enebhokisi yesipho esincinci enombhalo okroliweyo, owenziwe ngesiqwenga sentsimbi esetyenziselwa ukwakha isiphekepheke saseShenzhou ngaphakathi.
IVivo iQOO Space Knight Edition
Nangona uyilo lungaboni kulungelelwaniso oluninzi, Iphaneli yangasemva inesiphelo esahlukileyo sematte. Ukuba ayililo igama lophawu, umbono ongasemva unokubhideka kunye I-Pocophone F1 ngenxa yesiphelo esifana nokugqitywa kweKevlar yeF1. Ngaphandle kwale kunye neminye imixholo ye-Space Knight esele ilayishwe kwisixhobo, uhlelo olulinganiselweyo iQOO Space Knight alubonakali njenge-IQOO yesiqhelo.
Njengesikhumbuzo, IQOO yeyona nkampani yokudlala ifowuni yokuqala kwaye ixhotywe ngescreen se-6.41-intshi Super AMOLED yesikrini esine-FullHD + isisombululo kunye nomlinganiso wesikrini ukuya kumzimba we-91.7%. Ifowuni inikwe amandla yi Snapdragon 855 ukusuka kwiQualcomm, ngelixa iAdreno 640 GPU ivula imizobo. Ifowuni isebenza kwi-Funtouch OS esekwe kwi I-Android 9.0 Pie.
Ikwabandakanya i-in-display sensor yeminwe kwaye ifumana umbane wayo kwi I-4,000 mAh ibhetri ngenkxaso ye-44-watt ekhawulezayo. Ukufota, ifowuni ineekhamera ezintathu zangasemva ezinee-12 MP ze-wide-angle telephoto sensors, 13 MP wide-angle lens, and 2 MP sensor for portrait mode. Kwiiselfie, kukho ikhamera ye-12 MP enef / 2.0 yokuvula.
Iinkcukacha zamaxabiso kunye nokufumaneka kwe-Space Knight limited Edition azikabhengezwa. Nangona kunjalo, kuba uhlelo oluqhelekileyo kunye ne-12 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina inexabiso kwi-4,298 yuan (~ 558 euros), sinethemba lokuba olu hlelo luza kuba nexabiso eliphezulu. Kananjalo, ngekhe ithengiswe ngaphandle kwe China.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IVivo isungula ushicilelo olulinganiselweyo lweSpace Knight iQOO, uphawu lomdlalo wokuqala we-brand